Tafatafa tamin’i Olga Ramalason | Politika
par Raoto Andriamanambe | Août 29, 2019 | Tafatafa
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fironan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any amin’ny fanoherana ny loholon’i Madagasikara sady sekretera jeneralin’ny antoko, Olga Ramalason. Mampanantena izy ireo fa hanao ny asa maha vatomizàna ny mpanohitra araka ny tokony ho izy amin’ny fanaraha-maso ny fomba fiasan’ny governemanta.
Sekretera jeneralin’ny Tim
« Diso fanantenana tanteraka izahay»
Ahoana no fahitanao iny vokatra tamin’ny fifidianana ho solombavambahoaka farany teo iny?
Diso fanantenana izahay tamin’ny fomba nitantanana ny zotram-pifidianana. Iaraha-mahala fa nisy ny tsy fahatomombanana sy tsy fanarahan-dalàna tamin’izany. Manaporofo izany ny fitoriana izay voarain’ny Fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana (HCC) izay nahatratra aman-jatony. Raha tsy hiresaka afatsy ny lisim-pifidianana isika. Mpifidy marobe voasoratra anarana tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena no tsy hita indray tao amin’ny lisim-pifidianana nandritra ny fifidianana ho solombavambahoaka toy ny tao amin’ny boriborintany fahadimy teto Antananarivo Renivohitra. Misy koa ireo mpifidy izay afaka nifidy im-betsaka. Izany dia mampiseho fa tsy afaka itarafana ny safidim-bahoaka velively iny fifidianana farany teo iny. Maro ihany koa ireo kandidà izay tsy nanao fampielezan-kevitra kanefa voafidy ihany. Naharay fitarainana maro ihany koa izahay mikasika ny tsindry izay atao amin’ny mpiasam-panjakana mba hampandany ny kandidàm-panjakana toy ny tany Ambalavao.
Misy ireo kandidàn’ny antoko Tim izay resy tany amin’ireo faritra lazaina fa “anjakan’ny Tim” isaky ny fifidianana. Tsy anisan’ny tomponandraikitra amin’io vokatra io ve ny antoko? Mety fahadisoana tamin’ny fisafidianana kandidà ohatra?
Misy hatrany ny fifampiresahana eo anivon’ny antoko. Nohenoina ny hetahetan’ny mpikambana eny ifotony. Tsy nisy ny fanavakavahana. Nanatanteraka fifidianana savaranonando izahay ka sivana maro no napetraka dia ny fitondran-tena politika, ny fandraisana anjara mavitrika eo anivon’ny antoko ary ny fitondran-tenan’ny kandidà eny anivon’ny fiaraha-monina. Ho an’ny tranga sasantsasany kosa dia tsy maintsy niditra an-tsehatra ny birao politika ary nampanaja ny fitsipika anatiny tamin’ny fisafidianana ireo kandidà.
Inona no mety ho akon’izao vokatra izao ?
Nanolotra kandidà miisa 109 ny antoko ary nikendry ny hahazo ny antsasak’io. Fa araka ny efa nolazaiko teo, be loatra ireo tsy fahatomombanana tamin’ny fizotran’ny fifidianana. Diso fanantenana tanteraka izahay. Gaga sy talanjona tanteraka izahay rehefa nilaza sahady ny fahalanian’ny kandidàn’ny IRD miisa 80 ny filohan’ny Repoblika nandritra ny diany tany Parisy taorian’ny fifidianana kanefa isika àry teto an-tanindrazana tsy nahafantatra n’inona n’inona akory momba izany.
Raha jerena ny endrin’ny antenimierampirenena ankehitriny, inona no mety ho akon’io vokatra io?
Raisinay ny andraikitray. Ho tazominay ny fifandanjam-pahefana ary hifikitra amin’izany izahay ao amin’ny antenimierampirenena. Mijoro ho mpanohitra izahay ary tsy tokony hahagaga izany. Ho maodely amin’ny fomba fanaovana politika ny antoko Tim. Hiady izahay mba ho ara-pomba demokratika hatrany ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Hanao izay tratry ny herinay izahay mba tsy ho lasan-ko vavany fotsiny ny sata maha repoblikana an’I Madagasikara.
Inona àry ireo asa mivaingana vinavinain’ny antoko Tim mba hanantanterahana ireo fampanantenana ireo?
Tsy hanohitra befahatany ny governemanta izahay. Hampiakatra lenta ny ady hevitra ao amin’ny antenimierampirenena izahay mandritra ny fandinihana sy fandaniana tolo-dalàna sy volavolan-dalàna. Eo amin’ny fomba fanao politika anivon’ny antenimiera, laharam-pamehana ny famerenana ny hasin’io andrim-panjakana mpanao lalàna io dia ny antenimierampirenena. Tsy maintsy tonga manatrika fivoriana sy izay asa rehetra atao ao amin’ny antenimierampirenena ny solombavambahoaka satria fampandrosoana ny firenena no resaka eto. Tsy zaza ny solombavambahoaka ka tsy tokony hiandry fanasaziana vao hahay hitondra tena tsara. Fa raha ny tokony ho izy dia tokony hisy fanaraha-maso ny fahatongavan’ny solombavambahoaka izay tokony hiafara amin’ny fanagiazana amin’ny ampahany ny tambin-karaman’ireo mpingitrika lava.
Tsy matahotra ve ianareo ao amin’ny Tim ny hahatonga ny antenimierampirenena ho “mpanarak’efa” fotsiny ihany?
Nahafahanay nahazo traikefa bebe kokoa ny fotoam-piasàna teo aloha. Tokony hisintona lesona tamin’iny fotoam-piasàna iny isika mba hahafahana mametraka ho ambony hatrany ny tombontsoam-pirenena. Handresy lahatra ny solombavambahoaka hirona amin’izany izahay. Ekena fa vitsy an’isa izahay, saingy handresy lahatra ny solombavambahoaka mahaleo tena izahay mba hanaraka io fitondran-tena politika io ary mba hiara-hiasa aminay ho tombontsoam-pirenena. Mino izahay fa nisintona lesona tamin’ny lasa ireo solombavambahoaka mahaleo tena. Ekena fa mety hisy ireo olom-boafidy izay hanohana ny fitondrana, kanefa tadidio fa misy tambiny ny zava-drehetra. Ny olom-boafidin’ny antoko TIM dia nanaraka fiofanana sy atrikasa maromaro tamin’izy ireo mbola kandidà vao tonga amin’izao dingana izao. Manomboka izao, ireo lalàna laniana ao amin’ny antenimierampirenena dia tsy maintsy dinihin’ny solombavambahoaka amin’ny antsipiriany ary tsy maintsy dinihan’ireo manampahaizana manokana izay eo anivon’ny foiben’ny antoko Tim mba hanana lalàna faran’izay tsara amin’izay ny firenena. Tsy ho mora ny hanao izany fa mila mandray ny andraikitray izahay. Tsy hisalasala izahay hilaza ny tsy mety eto amin’ny tany sy ny firenena.
Naharatsy endrika ny fotoam-piasana farany teo ny resabe manodidina ny fanambazana vola AN’ireo solombavambahoaka ho tambin’ny fandaniana lalàna na fanekena ny fanapahan-kevitry ny governemanta. Ahoana no atao mba hialàna amin’io toe-javatra io?
Resaka fitondran-tena politika sy fahatsapan-tena io voalohany indrindra. Mila raisina ny fepetra rehetra mba hanakanana ny finiavana hampanjaka ny kolikoly amin’ny endriny rehetra. Tsy ho vato misakana amin’ny fampandrosoana ny firenena izahay. Ho dinihanay tsara ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna atolotra dinihana eo anivon’ny antenimierampirenena. Mandany izany izahay rehetra hitanay fa mety amin’ny firenena izany lalàna izany, tsy atao bontolo kosa ny fandaniana izany rehefa hitanay fa tsy mahasoa ny firenena. Izany no mahatonga anay manamafy hatrany fa ilaina ny fanofanana ireo olom-boafidy, ny ady amin’ny kolikoly ary ny finiavan’ny solombavambahoaka hizotra ho amin’izany.
Ny antenimiera, ao anatin’izany ny antenimierandoholona izay misy anao, ve, anefa, ho afaka hanatanteraka amin’ny antsakany sy andavany ny andraikiny?
Tsara ny mampatsiahy fa ny firafitry ny antenimierandoholona dia tsy ahitana taratra ny tena safidim-bahoaka nohon’ny hosoka sy tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana izay ho loholon’i Madagasikara. Zava-misy fa ny fitondrana niorina tamin’izany toe-javatra izany dia marefo hatrany. Amin’izao ihany koa, nisy ireo loholon’i Madagasikara izay nanao pimaso tamin’ny filohan’ny Repoblika rehefa lany izy. Taorian’ny fikasàna handrava ny antenimierandoholona tamin’ny alalan’ny fanovàna ny lalam-panorenana amin’ny alalan’ny fitsapankevi-bahoaka ary ny fikasàna hanena ny isan’ny mpikambana ao, dia tsapan’ireo parlemantera ireo anefa ny zava-misy. Averiko ihany fa tsy ho vato misakana amin’ny fampandrosoana ny firenena izahay. Izany anefa tsy midika fa avelanay hanao izay tiany atao ny mpitondra. Porofon’izany: izaho no hany loholon’i Madagasikara tao Anosikely izay nanjakazakan’ny antoko HVM, kanefa tsy nahasakana ahy hijoro ho vatomizàna amin’ny fomba fiasan’ny governemanta sy hanolotra soso-kevitra amin’ny fampandrosoana ny firenena izany.
Nangonin’i Iloniaina Alain